Uma unomkhiqizo ovela ku-Apple (i-iPhone, i-iPad , njll), uyazi ukuthi kukhona into enjenge-ID ye-Apple - i-ID yomsebenzisi jikelele yedivayisi "ye-apple". Ihlanganisa idivayisi ethile kwi-Apple isevisi ye-cloud, ngaleyo ndlela ikuvumela ukuba uqaphele idivayisi futhi uyivumelanise.
Kulesi sihloko, sizozama ukunaka isimo esibi ukuthi wonke umnikazi wedivayisi ye-Apple angabhekana. Lona umlayezo mayelana nokuthi i-iPhone ivinjelwe i-ID, ekhonjisiwe esikrinini sefoni noma ithebhulethi yakho. Cabanga ngezimo eziyinhloko nezizathu ezingenzeka ukuthi zingabonisa kanjani leli rekhodi, futhi ikutshele nokuthi ungenzani ukuze uyisuse.
Kungani ngidinga i-ID ye-Apple?
Njengoba sekuphawuliwe, ngosizo lwe-ID umnikazi angakwazi ukuphatha igajethi yakhe ngandlela-thile. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa isevisi ye-iCloud. Isibonelo esicacile sokuthi lokhu kuhlelwe kanjani kungaba njalo: uma idivayisi ilahlekile, umnikazi uyakwazi ukubonisa esikrinini umlayezo: "I-iPhone ivinjiwe (lokhu kusebenza kunoma iyiphi enye imodeli), buyisela ifoni." Futhi, yiqiniso, lowo ozoba nedivayisi ezandleni zakhe, ngeke abe nokufinyelela kokuqukethwe, amarekhodi ku-smartphone.
Vumelana, umsebenzi usebenza kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uma othile eyeba ucingo futhi uyithengisa, umnikazi omusha uzobona umlayezo othi i-smartphone ivaliwe, ngemva kwalokho uzokwazi ngesikweletu sayo sokuyibuyisela.
Ezinye izici ze-ID ye-Apple
Ikhono lokubonisa ukubhaliswa ukuthi i-iPhone ivinjelwe akuwona umsebenzi kuphela wendlela enjenge-Apple ID. Eqinisweni, lolu hlelo (oluhleliwe njengengena ngemvume kanye nephasiwedi) likuvumela ukuthi wenze ukuthenga kusevisi yokuqukethwe ye-AppStore, ukufinyelela kumasevisi wezokuxhumana, ukuphatha idivayisi nge-iCloud. Ngokuvamile, ngingathanda ukusho lokhu: ungakha i-ID yakho siqu, wonke umuntu uyakwenza mahhala. Kodwa lokhu kuyinto yokuzikhethela, ngakho akudingeki ubhalise. I-ID nje yenza ifoni yakho ifinyeke kalula. Ngaphezu kwalokho, uma kwenzeka ukulahlekelwa kwe-iPhone 4 yakho evinjiwe ngeke ukwazi ukusebenzisa abathungi, futhi lokhu kuyinto ecacile ngokuphepha.
Ubuza: Ngingayithola yini indlela engangenelela uhlelo futhi ngiqhubeke ngisebenzisa idivayisi? Ngombono, cha. Eqinisweni, sonke siyazi umlando, lapho ifoni ebiwe ithengiswa, emva kwalokho baqala ukuyisebenzisa njengangaphambili.
Kunezindlela eziningi zokuhlela lokhu. Elula, ngokusobala, ukubeka idivayisi "kwimodi yendiza" ngendlela yokukhipha ukukhiya. Kule ndaba, ifoni nje ayinaso isikhathi sokuthola isignali kusuka ku-iCloud, futhi labo abanakho bayoba nesikhathi esincane sokuyikhipha, noma ngandlela-thile bahlele kabusha izilungiselelo.
Omunye umbuzo wukuthi i-smartphone ngeke isetshenziswe ngokujwayelekile ngumnikazi wayo weqiniso. Ngempela, labo ababa ucingo, asikho isidingo sokusebenza naye - badinga ukuyithengisa, bathole imali bafihle kokubili umnikazi wangaphambili nomthengi. Ngokuqondene nezimo lapho umnikazi ofanele wefoni ephathekayo ene-umyalezo "Uvimbe i-iPhone nge-ID", lolu hlelo alusebenzi lutho. Wena njengomnikazi kuzodingeka uqonde ukuthi yini eyabangela ukukhiya okunjalo. Yilapho okuthokozela kakhulu kuqala khona.
Ungase uzwe izindaba eziningi mayelana nohlelo lokukhohlisa. Kube sekukhona abantu abaningi abaza kuye. Ngolunye usuku umlayezo ufika esibukweni. Ithi nge-iPhone 4 evaliwe, futhi ukuthola ukufinyelela kuyo, udinga ukukhokha ama-ruble angu-1000 we-wallet ecacisiwe.
Ukusesha okuncane okuthola ulwazi, futhi sithola izindaba eziningi ezifanayo. Zonke zazo zihlanganisa ukuthi ekubonisweni kwezobuchwepheshe i-Apple zinikeze umlayezo ngokuqukethwe okufanayo lapho kwakunezidingo zokukhokha imali. Ngakho-ke kunesizathu sokuqonda ukuthi lokhu kudlalwa kusebenza kanjani.
Abakwa-Scammers abathumela umyalezo wokuthi i-iPhone yakho ivinjelwe sebenzisa isevisi ye-iCloud echazwe ngenhla. Ungayifinyelela ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sewebhu (okungukuthi, ukufaka nje imininingwane ye-akhawunti yakho kuwebhusayithi ekhethekile). Konke okwehliswayo okudingayo ukufeza izinhlelo zabo ngempumelelo kufinyelela ebhokisini lakho lemeyili. Okulandelayo, ngokulandelana, bafunda iphasiwedi kusuka ku-ID ye-Apple, bese uvimbela idivayisi yakho.
Ukukhipha umlayezo ngombhalo obonisa imininingwane yokukhokha yezigebengu kulula kakhulu, ubhale nje ngaphakathi kwesikhombimsebenzisi sesevisi. Mayelana nokususwa okuqhubekayo kokukhiya nokusebenza ngedivaysi, kuxhomeke ngokuyinhloko kunembeza we-scammer. Ngombono, akukho okubavimbela ukuba baphinde baphinde baphinde baxoxe.
Benza kanjani lokhu?
Wonke umuntu unombuzo ngokushesha mayelana nokuthi abaqashi bayakwazi kanjani ukusebenzisa lolu hlelo. Ngenxa yokuthi bathola ukufinyelela ku-akhawunti yomnikazi wedivayisi "ye-apula"? Futhi, yebo, uma i-iPhone 4 ivinjiwe, ngingayivimbela kanjani mahhala?
Okokuqala, sichaza uhlelo lomsebenzi wobugebengu. Njengoba sekushiwo ngenhla, ukuqala, badinga ukufinyelela ebhokisini lemeyili lomsebenzisi. Lokhu kwenziwa ngosizo lwenqubo ethile enonya, isayithi equkethe ifomu lokungena kwedatha, noma igciwane leTrojan elifunda amaphasiwedi akho. Eqinisweni, isibhamu sezigebengu kule ndawo asinamkhawulo - abantu abaningi abancinci kakhulu kwezobuchwepheshe bekhompiyutha, ngenxa yokuthi baziphathe kanjani ngeveve futhi abakhombisi ngokwanele.
Ngemuva kokuthi i- imeyili iphikisiwe, i- ID ye-Apple isethwe kabusha. Imigwaqo ye-traversal yomsebenzisi isuke iqoqwe. Isibonelo, isihlungi sidalwe ebhokisini lemeyili elisusa ama-imeyili avela ku-Apple ngephasiwedi entsha (okuyinto umnikazi osemthethweni ozoyicela). Khona-ke, kusobala ukuthi umuntu akatholi incwadi futhi akakwazi ukushintsha iphasiwedi yakhe.
Futhi, izigebengu azikwazi ukuvimbela ngokuphelele ukufinyelela kweposi kumuntu ohlukumezekile, ngoba ngeke babe nethuba lokuxhumana naye futhi achaze izidingo ngokuningiliziwe. Futhi esimweni esivamile, lokhu kwenziwa kuphela ngeposi.
Uma ubona umlayezo wokuthi i-iPhone yakho ikhiyiwe, akufanele uthukuthele. Isixazululo silula, udinga nje ukuqonda kancane ukuthi izigebengu zenza kanjani. Njengoba kuphawuliwe ngenhla, kufaka phakathi isihlungi se-imeyili esikhethekile esisusa imilayezo engenayo evela ku-Apple.com. Kwanele ukukususa, futhi uzobona imilayezo equkethe imiyalo yokuthola.
Esikhathini se-ID ye-Apple, faka ukhiye othunyelwe e-mail futhi i-akhawunti yakho izobuyiselwa. Lokhu kuzokunika ithuba lokuvala ifoni noma ithebhulethi. Ngokusobala, abaphangi ngeke babe nokunye okuzokubonisa ukuze bafune ukukhokha.
Yeka ukuthi ungabanjwa kanjani futhi?
Ngemuva kokuthi isimo se "iphone evinjiwe" sizosuswa, sincoma ukuthi sibheke eziningana zezinyathelo ezihlose ukulindela amacala anjalo esikhathini esizayo. Okokuqala, sikhuluma ngamaphasiwedi. Kumele ukuthi ushintshwe kuwo wonke ama-akhawunti abo - kokubili ebhokisini lemeyili nasesevisi ye-Apple ID.
Okulandelayo, cabanga ukuthi ungaphila idatha, ikakhulukazi - iphasiwedi. Isibonelo, kungaba igciwane lekhompyutha noma isayithi lobuqili, elifana nelosemthethweni. Ukuze uthole ukuthi yini engalungile, landa i-antivirus kanye nohlelo lokuskena lokungcupheni. Ungathola lokhu emgqeni womkhiqizo wanoma yiluphi uhlobo lwe-brand - i-Nod32 efanayo, uMcAfee, Kaspersky - zonke lezi z studios nazo zinikeza izixazululo zabo.
I-smartphone "Lumiya 735" (i-Nokia Lumia 735): izincazelo, ukubuyekezwa, ukubuyekezwa